Aịzaya 22 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ihe Chineke kpebiri ime Ndagwurugwu Ọhụụ (1-14)
Elayakim nọchiri Shebna bụ́ onye na-elekọta ụlọ (15-25)
E nwere ihe otu ntu a kụbara n’ahụ́ ụlọ pụtara (23-25)
22 Ihe Chineke kpebiri ime Ndagwurugwu Ọhụụ:*+ Gịnị bụ nsogbu gị, nke mere ndị gị niile ji gbagoo n’elu ụlọ? 2 Ebe niile n’obodo gị ga na-agba aghara. A ga na-eme mkpọtụ, na-enwekwa aṅụrị na ya. Ọ bụghị mma agha ka a ga-eji gbuo ndị gị a ga-egbu egbu. Ha agaghịkwa anwụ n’agha.+ 3 Ndị niile na-achị gị n’aka ike ga-agba ọsọ otu mgbe.+ A ga-akpụrụ ha n’ejighị ụta. Ha gbagagodị ebe dị ezigbo anya,A ga-akpụrụ ndị niile e jidere, tụọ ha mkpọrọ.+ 4 Ọ bụ ya mere m ji sị: “Kwụsịnụ ile m anya. M ga-ebe ezigbo ákwá+Maka mbibi e bibiri ndị m. Unu enyela onwe unu nsogbu ịkasi m obi.+ 5 N’oge ahụ, Ọkaakaa Onyenwe anyị, bụ́ Jehova nke ụsụụ ndị agha,Ga-eme ka ọgba aghara dị, meekwa ka e nwee ndị e meriri na ndị chị obi n’aka+Na Ndagwurugwu Ọhụụ. A ga-akwada mgbidi.+ Ndị mmadụ ga na-etikwa mkpu, a na-anụ olu ha n’ugwu. 6 Ịlam+ bu akpa akụ́ juru,Jirikwa ụgbọ ịnyịnya agha na ịnyịnya bu ndị mmadụ na-abịa. Kia+ ewepụkwala ihe e ji kpuchie ọta. 7 Ụgbọ ịnyịnya agha ga-ejupụta naNdagwurugwu gị ndị kacha mma. Ịnyịnya agha dị iche iche* ga-anọkwa n’ọnụ ụzọ ámá. 8 A ga-ewepụkwa ihe e ji kpuchie Juda. “N’oge ahụ, unu lee anya n’ebe a na-edowe ngwá agha n’ụlọ a na-akpọ Ụlọ Oké Ọhịa,+ 9 unu ga-ahụ ọtụtụ ebe gbawara agbawa ná mgbidi Obodo Devid.+ Unu ga-emekwa ka mmiri nke si n’ọdọ mmiri ndịda na-asọba n’otu ebe.+ 10 Unu ga-agụ ụlọ dị na Jeruselem ọnụ, kwatuokwa ụfọdụ n’ime ha iji mee ka mgbidi ahụ sikwuo ike. 11 Unu ga-egwukwa ebe mmiri nke si n’ọdọ mmiri ochie ga na-asọba n’agbata mgbidi abụọ dị n’obodo ahụ. Ma, unu agaghị atụkwasị Onye Ukwu kere ya obi. Unu agaghịkwa ahụ onye ahụ haziri ya kemgbe ụwa. 12 N’oge ahụ, Ọkaakaa Onyenwe anyị, bụ́ Jehova nke ụsụụ ndị agha,Ga-agwa unu ka unu bee ákwá, ruokwa uju.+ Ọ ga-agwakwa unu ka unu kpụchaa isi unu, yirikwa ákwà iru uju. 13 Ma, unu agaghị ekwe, kama, unu ga na-ekpori ndụ, na-aṅụrị ọṅụ,Na-egbu ehi, na-egbu atụrụ,Na-eri anụ, na-aṅụkwa mmanya.+ Unu ga-asịkwa: ‘Ka anyị na-eri, na-aṅụ n’ihi na echi ka anyị ga-anwụ.’”+ 14 M nụziri ka Jehova nke ụsụụ ndị agha na-ekwu, sị: “‘A gaghị ekpuchiri unu mmehie a ruo mgbe unu nwụrụ.’+ Ọ bụ Ọkaakaa Onyenwe anyị, bụ́ Jehova nke ụsụụ ndị agha, kwuru ihe a.” 15 Ọkaakaa Onyenwe anyị, bụ́ Jehova nke ụsụụ ndị agha, kwuru, sị: “Gakwuru Shebna,+ bụ́ onyeisi na-elekọta ụlọ* eze, sị ya, 16 ‘Olee ihe gbasara gị ebe a, oleekwa onye i nwere ebe a, nke mere i ji gwuoro onwe gị ili ebe a?’ Shebna na-egwu ebe a ga-eli ya n’ebe dị elu. Ọ na-awapụtara onwe ya ebe ọ ga-anọ na-ezu ike* n’otu nnukwu nkume. 17 ‘Jehova ga-ejide gị, jirikwa ike tụọ gị n’ala. 18 Ọ ga-afụkọtasi gị ike, tụpụ gị n’ala sara mbara otú e si atụpụ bọl. N’ebe ahụ ka ị ga-anwụ, n’ebe ahụkwa ka ụgbọ ịnyịnya gị dị ebube ga-adị. Ihe a ga-emenye ezinụlọ nna gị ukwu ihere. 19 M ga-achụpụ gị n’isi ị nọ, chụtuokwa gị n’ọkwá. 20 “‘N’oge ahụ, m ga-akpọ onye na-ejere m ozi, bụ́ Elayakim+ nwa Hilkaya, 21 yiwe ya uwe mwụda gị, were ákwà ị na-eke n’úkwù kesie ya ike,+ nyefeekwa ya ọchịchị* gị. Ọ ga-aghọkwara ndị bi na Jeruselem na ezinụlọ Juda nna. 22 M ga-atụkwasị mkpịsị ugodi ụlọ Devid+ n’ubu ya. O nweghị onye ga-emechi ụzọ o meghere. O nweghịkwa onye ga-emeghe ụzọ o mechiri. 23 M ga-eme ka o sie ike ka ntu a kụbara n’ahụ́ ụlọ siri ike. Ọ ga-abụkwara ezinụlọ nna ya ocheeze dị ebube. 24 Ha ga-ekokwasị ya ebube niile ezinụlọ nna ya nwere, ma ụmụ ma ụmụ ụmụ* ma arịa niile dị ntakịrị ma efere ma nnukwu ite niile. 25 “Jehova nke ụsụụ ndị agha kwuru, sị, ‘N’oge ahụ, a ga-efopụ ntu ahụ a kụbara n’ahụ́ ụlọ siri ike.+ Ọ ga-ada laa n’iyi. Ihe e kokwasịrị n’elu ya ga-adakwa laa n’iyi, n’ihi na Jehova ekwuola ya.’”
^ O nwere ike ịbụ Jeruselem.
^ Na Hibru, “ebe ọ ga-ebi.”
^ Ma ọ bụ “ikike.”
^ Ma ọ bụ “alaka.”